Yintoni i-Webrooming? Yahluke ngantoni kwigumbi lokubonisa? | Martech Zone
Yintoni i-Webrooming? Yahluke ngantoni kwigumbi lokubonisa?
Lwesine, Disemba 8, 2016 NgoLwesibini, Novemba 7, 2017 Douglas Karr
Kule veki bendiphanda ukuthenga izixhobo zomsindo zesitudiyo sethu. Ndihlala ndibhampisa kwindawo yokuvelisa, emva koko iindawo ezikhethekileyo ze-e-commerce, iindawo zentengiso kunye neAmazon. Ayindim ndedwa. Ngapha koko, iipesenti ezingama-84 zabathengi bajonga iAmazon ngaphambi kokuthenga
Uluhlu lwewebhu - xa umthengi esiya evenkileni ukuya kuthenga emva kokuphanda imveliso kwi-intanethi.
Igumbi lokubonisa - xa umthengi ethenga kwi-Intanethi emva kophando t
I-infographic evela kwiKoeppel ngqo, Igumbi lokufundela Vs Igumbi lokubonisa: Isikhokelo sokuThengisa kuThengiso lweeholide, Ukophula indlela yokuziphatha ezivenkileni nakwisizukulwana:
Baby Boomers - Ivenkile kwivenkile kunye nexabiso lokudibana komntu nomnye kwaye ulindele inkonzo yabathengi enolwazi.
Millennials - Thenga kwi-Intanethi kunye nexabiso kunye nefuthe kwilizwi-lomlomo.
Isizukulwana X - Thenga kwi-Intanethi kwaye wenze i-imeyile elungiselelwe iimfuno zabo kunye nokuthenga imbali.
Isizukulwana Z -Thenga kwi-Intanethi kunye ne-smartphone kunye nexabiso lezaphulelo ezizodwa, ukuhanjiswa simahla, izinto zokunyaniseka
I-infographic ibeka yonke into abathengisi ekufuneka bayazi malunga nokuGcinwa kweWebhu ngokuchasene nokubonisa igumbi, kubandakanya iintlobo zeemveliso ezichaphazeleke kakhulu kwezi ndlela, kunye nendlela yokujolisa kwizizukulwana ezahlukeneyo ngexesha leholide.
tags: ngcacisokoeppel ngqoukuthengisaukubonisaInkcazo yokubonisaIgumbi lewebhuInkcazo yegumbi lewebhuyintoni igumbi lokubonisayintoni i-webrooming
Ngomhla wama-9 ku-Disemba 2016 ngo-1: 16 AM
Isihloko esihle kakhulu kufuneka nditsho !!
Le yinto epholileyo ukuba uyifunde malunga nokuhlanjwa kwewebhu kunye nokubonisa igumbi. Ndicinga ukuba igumbi lokubonisa linokukhathaza abathengisi.